Wararka Maanta: Sabti, July 10, 2021-Wararkii ugu dambeeyay qaraxii Ismiidaminta ahaa ee maanta ka dhacay Muqdisho iyo Al-shabaab oo sheegatay + SAWIRO
Afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo warbaahinta kula hadlay goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay inuu qaraxa geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, islamarkaana uu ka badbaaday weerarka Taliye Farxaan Qaroole oo u jeedku ahaa in lagu khaarajiyo.
"Weerar argagixisada soo maleegtay ayaa lagu weeraray gaari laga soo buuxiyay walxa qarxa, kaasoo lagu weeraray Taliyaha guud qeybta Booliiska ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole, Taliyaha wuu nabad qabaa walow uu jiro khasaare uu reeby qaraxa ka dhacay Isgoyska Banaadir, dhimashada waa 5 ruux dhaawacana waa 9 qof kuwaas oo u badnaa dhamantood dad wadada maraayay" ayuu yiri Afhayeenka Booliiska Sadiiq Aadan.
Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ka muuqday burbur aad u xoogan oo gaaray dhismayasha ku yaala halkaasi iyo waliba kuwa xaafadaha ka agdhaw.
"Weerarada Argagixisada ee noocaan oo kale ah ma noqon doonaan kuwa naga niyad jabiya shaqada qaranka aan u haayno" ayuu yiri Afhayeenka Booliiska Sadiiq Aadan.
Dhinaca kale Al-shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarka qaraxa Ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoona sheegay iney ku dileen 4 askri oo ka tirsnaa ilaalada Taliye Farxaan Qaroole, kuna dhaawaceen 5 kale oo isla ilaalada taliyaha ka mid ahaa.
7/10/2021 1:42 AM EST